Global Voices teny Malagasy · 13 Novambra 2011
Tantara tamin'ny 13 Novambra 2011
Afrika Mainty13 Novambra 2011
Afrika : Inona ny tantaranao ? dia ilay tetikasa farany tontosain'nyA24 Media. Natao izany hanasongadinana ny olana iraisan'ny Afrikana sy hampiroboroboana ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra. Tamin'ny alalan'ny dinika an-tserasera no ahafahan'ny Afrikana mifanakalo hevitra sy mamaha olana ao amin'ny Afrika: Inona ny tantaranao? Ankoatra izany, manome sehatra iray...
Amerika Latina13 Novambra 2011
Alfonso Cano, ilay mpitarika ngeza lahy amin'ny "Revolutionary Armed Forces of Colombia" (FARC) na ny Hery Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia, dia lavo ny 4 Novambra tao amin'ny departemantan'i Cauca nandritra ny ady nifanaovana tamin'ny miaramila. Ny Kolombiana dia naneho hevitra mikasika ny nahafatesany tao amin'ny bilaogy, ary naneho koa ny...